posted by မြင့်ဇေ @ 10:31 PM2comments
သားတို့ အသက်နဲ့ အမျှ
posted by မြင့်ဇေ @ 10:28 PM2comments
၁၃၀၀ရတီ - ၁၃၀၀ပြည့်မျိုးဆက်ကို ညွှန်းတာပါ၊
posted by မြင့်ဇေ @ 7:18 PM2comments
posted by မြင့်ဇေ @ 8:51 AM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 11:16 AM 1 comments
posted by မြင့်ဇေ @ 7:44 AM2comments
မှတ်ချက်။ ။ မင်းလူတို့ အကြောင်းကို ကဗျာဆရာ ယောဟန်အောင်က သေတမ်းစာ အမည်နဲ့ကဗျာတပုဒ်ဖွဲခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် ကျောင်းသားတပ်မှ ၆ ဦးနှင့်မွန်ပြည်သစ်တပ်မတော်မှ ၂ ဦးကျသည်။ စုစုပေါင်း ၁၄ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရသည်။
posted by မြင့်ဇေ @ 10:41 PM0comments
နအဖဥက္ကဋ္ဌရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် တွေ့ဆုံနေမှုအပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နိုင်အောင်မငေး နှင့် Kaowao Newsgroup တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
Kaowao - အောက်တိုဘာ(၂၄)ကစပြီးတော့ စရဖက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ် အဖွဲ့အတော်များများကို တွေ့ဆုံပြီးပြီ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီကိုရော လာရောက်တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းကြားထားတာ ရှိလား?
နိုင်အောင်မငေး - ကျနော်တို့ကို တွေ့ဆုံဖို့ အကြောင်းကြားထားတာတော့ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့ဆုံဖြစ်မယ်လို့ တရားဝင်အကြောင်းကြားထားတာတော့ မရှိသေးဘူး။ ရက်အတိအကျတော့ မရှိသေးပါဘူး။
Kaowao - ကေအိုင်အေ ခွဲထွက်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ မထူးနော်အဖွဲ့တို့ကိုပါ ဒီဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က အကုန်တွေ့ဆုံနေ တာကြားသိရတယ်၊ အခုလာတွေ့ဆုံတာလဲ နအဖဥက္ကဌကြီးကိုယ်တိုင်က တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် နဲ့ဆိုတော့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီဘက်ကရော ဘာများတင်ပြဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာရှိလဲ?
နိုင်အောင်မငေး - ဒီဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ကို တစ်ခါမှတွေ့ဆုံခဲ့တာမရှိပါဘူး၊ လာရောက်တွေ့ ဆုံတယ် ဆိုတာက ထူးခြားမှုတော့ ရှိပါတယ်၊ ခါတိုင်းဆို ကျနော်တို့ကနေတဆင့် ရန်ကုန်ကိုသွားပြီး တွေ့ဆုံရတာဘဲ ရှိဖူးတယ်၊ ဒီလို ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ဒေသမှာ ဒီလိုလာရောက်တွေ့တာလဲ သူတို့ဘက်က မေးခွန်း ထုတ်ဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ ဒီနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အဖြေရှာဖို့ဘဲ၊ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေး လမ်းကြောင်း ဖြစ်မြောက်အောင် တကယ့်စေတနာ အမှန်နဲ့ တကယ်တိတိကျကျလုပ်ဆောင်ဖို့ဘဲ ကျနော်တို့ အကြံပြုမှာပေါ့နော်။
Kaowao - ဒီကာလအတွင်းမှာ နအဖတို့က သူတို့နဲ့ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ မတက်ရလေအောင် လာရောက် ဆွေးနွေးနေတာလို့ ပြည်ပအကဲခတ်တွေက ပြောနေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုအခြေအနေမျိုးမှာမှ တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေနဲ့ လာတွေ့ဆုံရတာလဲလို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ထင်ပါသလဲ။
နိုင်အောင်မငေး - အခုတွေ့ဆုံတဲ့ပုံစံက တကယ့်ထူးထူးခြားခြားလို့ ဆိုရမှာဘဲ၊ ကာလအခြေအနေနဲ့လည်း ထူးထူးခြား ခြား ရှိပါတယ်။ ဒီစက်တာဘာလ ဆန္ဒပြမှုအပြီးရယ်၊ အမျိုးသားညီလာခံရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးရယ်ပေါ့၊ ကျနော်တို့ဘက်က ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့က တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ ပြည်သူတွေကောင်းစားဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က (၉၅)ခုနှစ်ကတည်းက အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့တာပါ၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့က နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းအရဘဲ တွန်းအားပေးသွားမှာပါ။ ဒီceasefire ကို အကြောင်းမဲ့ ကျနော်တို့ဘက်က ဖောက်ဖျက်ဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။
Kaowao - နအဖ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆက်လက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဘာကြောင့်ကြိုဆိုတာလဲ။ အကောင်းဘက်ကို ဆောင်လာနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲ လို့ ထင်ပါသလား?
နိုင်အောင်မငေး - တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုကတည်းက ကျနော်တို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ကြိုဆိုပါတယ်၊ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးအမြင်ပေါနော်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကို ဒီအကန့်အသတ်တွေ ထားထားတာ မသင့်လျော်ဘူး၊ မဖြစ်သင့်ဘူး၊ ဒီအကန့်အသတ်တွေ ထားထားခြင်းအားဖြင့် ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အဟန့်အတား အများကြီးဖြစ်စေတယ်၊ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မဖြစ်အောင်ကို နအဖဘက်က တမင်တကာ လုပ်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်၊ တကယ်လို့များ တကယ့်စေတနာမှန်မှန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်၊ ဒီအကန့်အသတ်တွေကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အထမမြောက်နိုင်ဘူး ဆိုပြီးတော့လည်း စိုးရိမ်စိတ်တွေ မထားသင့်ပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဘယ် လောက်လက်တွေ့ကျကျလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘဲ အရေးကြီးပါတယ်။
Kaowao - နအဖ နဲ့ ဒေါ်စုတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အပေါ်မှာ တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဘာများ မျော်လင့်နိုင်ပါသလဲ?
နိုင်အောင်မငေး - တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကတော့ တကယ့်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အခြေအနေ၊ အချိန်အခါက ပေးလာ ပြီးလေ၊ ဒါကြောင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အမြန်ဆုံးလုပ်သင့်နေပါပြီ၊ ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ဆန္ဒ၊ နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုလာ မှုကိုလည်း လေးစားခြင်းအားဖြင့် လုပ်သင့်ပါပြီ၊ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကို ရှာသင့် ပါတယ်၊
Kaowao - နအဖက သူတို့ရဲ့လမ်းပြမြေပုံ(၇)ချက်အတိုင်း သွားမယ်လို့ လာအို နဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ပြန်လာတဲ့ နအဖဝန်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ကလဲ သတင်းစာမှာ ပြောနေတယ်။ တဖက်ကလဲ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ရော မိမိတို့ရဲ့ပြတ် သားတဲ့ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ ဒီအချိန်မှာ မရပ်တည်သင့်ဘူးလား?
နိုင်အောင်မငေး - ကျနော်တို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဖို့ ကျနော်တို့အမြဲတမ်း ပြောနေ၊ တောင်းဆိုနေတဲ့အရာတစ်ခုပါ၊ ဒါက ကျနော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်မှာလည်း ထည့်ထားတယ်၊ အဖြေရှာဖို့ ဒီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးထက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလည်း မရှိပါဘူး၊ တကယ်လို့များ နအဖဘက်က ဒီလမ်းပြမြေပုံအတိုင်း သွားမယ် ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေရလာဒ်တစ်ခု ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလမ်းပြမြေပုံအတိုင်း သွားမယ် ဆိုရင် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားသလို ဖြစ်နေတယ်၊ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားရာရောက်နေတယ်၊ (၅/၉၆)ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လည်း လူထုရဲ့ ပါဝင်မှုအခန်း ကဏ္ဍကိုလည်း အကန့်အသတ်ထားထားတယ်၊ နောက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲရလာဒ်ကို ကျနော်တို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဓမ္မဓိဌာန် မကျပါဘူး၊ ဒီလမ်းပြမြေပုံအတိုင်း သွားနေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်၊ ဖွံ့ဖြိုးသာယာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခု တည် ထောင်ဖို့အတွက် ဒါဟာကောင်းတဲ့ရလာဒ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပါဘဲ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ပါ၊ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကနေဘဲ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြပါ၊ ကျနော်တို့က အမျိုးသားညီလာခံမှာကတည်းက အပြုသဘောဆောင်မဲ့ကောင်းတဲ့ရလာဒ် ထွက်လာမှာမဟုတ်လို့ ညီလာ ခံကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်နေတဲ့အဆင့်ကနေ လေ့လာသူအဆင့်ဘဲ တက်ရောက်တာလည်း ကျနော်တို့က ပြတ်ပြတ် သားသား လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့၊
Kaowao - ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်မှုကို လျှော့ကျပြီး ကိုယ်ပြည်တွင်းရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ နအဖက အားထုတ်လာတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
နိုင်အောင်မငေး - နအဖအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာမှ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပါဝင်မှုကို လျှော့ချပြီတော့ အဖြေရှာဖို့ကြိုးစားလာတာ လည်း မသင့်လျော်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီဂလိုဘယ်လိုက်စေးရှင်းခေတ်ထဲမှာ ဒီလိုအထီး ကျန်ပုံစံမျိုး နေလို့မသင့်တော့ပါဘူး၊ အခြားနိုင်ငံတို့နဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ နေရမယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တစ်နေ့ ထက်တစ်နေ့ အခက်အခဲတွေ ကျန်းမားရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးမှအစ ကပ်ဘေးဒုက္ခအများကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ လာတဲ့အခါကျရင် ကျနော်တို့ကို မပြစ်ပယ်ဘဲ ဖေးမကူညီကြဖို့၊ ဆွဲခေါ်ဖို့၊ ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က အထီးကျန်စွာ မနေဘဲ နိုင်ငံတကာအလယ်ရဲ့အားပေးကူညီမှုတွေ၊ စာနာမှုကိုလည်း အလေး အနက်ထားသင့်ပါတယ်၊ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးအဖြတ်အတိုင်း၊ ဒီယူအန်အက်စ်စီရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်း သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေး နွေးရေးဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ကျနော်တို့ တိတိကျကျ သွားသင့်ပါတယ်၊
Kaowao - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြေငြာချက်မှာ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလဲ အလေးအနက်ထား ကြောင်း ဖော်ပြထားတယ်။ ဒီနအဖရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကြားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ ဒေါ်စု အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါ့မလား?
နိုင်အောင်မငေး - ဒါကတော့ နအဖရဲ့သဘောထားအမြင်အပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပါတယ်၊ သူတို့က Dialogue ဖြစ်ဖို့အခြေ အနေ၊ ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ၊ ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပါတယ်၊ Dialogue ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒစေတနာက မမှန် ကန်ဘူးဆိုရင်၊ Dialogue ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမည်ခံပြီးတော့ တခြားလုပ်ငန်းတွေဘဲဆက်လုပ်သွားနေမယ်ဆိုရင် ဒါက သမိုင်းစာမျက်နှာအထက်မှာရော ရာဇဝင်ဆိုးတစ်ခု တွင်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီDialogue ကို အခြေပြုပြီးတော့ လှည့်စားမှု မပြုကြပါနဲ့၊ စေတနာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုး၊ တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုး မနစ်နာစေဖို့ အထူးရှေ့ရှုပြီး တော့ ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားသင့်ပါတယ်။
Kaowao - အခြားဘဝတူတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရော ဘာများတိုက်တွန်းချင်တာရှိပါသလဲ?
နိုင်အောင်မငေး - ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကျိုးကိုဘဲ ကြည့်ကြပါ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်ကြပါ၊ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆိုရင် အားပေးကူညီကြပါ၊
မှတ်ချက်။ ။Kaowao သတင်းဌာနမှ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ Asohn Vi တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။
posted by မြင့်ဇေ @ 9:00 PM0comments
နွေဦး ကို ဖူးဖို့
ဟော့ဒီ ရာသီပြောင်းချိန်မှာ။ ။
posted by မြင့်ဇေ @ 1:15 AM0comments
posted by မြင့်ဇေ @ 10:40 PM 1 comments
ဤစစ်တမ်းသည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင် ကဗျာဆရာတဦး၏ အကြံပြုစစ်တမ်း ဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင် ကာယကံရှင်က သူ၏ ပုဂ္ဂလိက အမြင်ကို ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ကြိုးစား တင်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် တဦးချင်း သဘော သက်ဝင်နေသဖြင့် ဤအကြံပြု စာတမ်းကို ကာယကံရှင်၏ အမည်နှင့် တွဲလျက် “အောင်ဝေး စစ်တမ်း” ဟု အမည်ပေးပါသည်။ ခေါင်းစဉ်ငယ်အဖြစ် “တနှစ်အတွင်း အနိုင်တိုက်ရေး၊ အာဏာသိမ်းပိုက်ရေးလမ်းစဉ်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ယင်း ခေါင်းစဉ်ငယ်မှာ ဤစစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အဓိပ္ပါယ်အချုပ်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းလက်တွေ့ အခြေအနေများအရ မြန်မာပြည်သူ လူထုကြီးသည် မဆလ စစ်အစိုးရ (၂၆)နှစ်တာ အုပ်စိုးမှုကို ဖြုတ်ချသည့် ပထမ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က Students-led ကျောင်းသားများ ဦးဆောင် အသေခံ တိုက်ယူ၍ ရခဲ့သော အောင်ပွဲ အပေါ်တွင် အမြတ်ထုတ် အာဏာ သိမ်းသွားခဲ့သည့် စစ်တပ်အစိုးရ န၀တ/နအဖ၏ (၁၉)နှစ်တာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုကို အန်တုပြီး မြန်မာပြည်သူ လူထုကြီးသည် ဒုတိယ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကို ၂၀၀၇ခုနှစ် မကြာသေးခင် ရက်များက ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ယခု ထို Sanghas-led သံဃာတော်များ ဦးဆောင် အသေခံ တိုက်ယူ၍ ရခဲ့သော အောင်ပွဲ အပေါ်တွင် နအဖ စစ်အစိုးရက ထပ်မံ အမြတ်ထုတ် နေပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။
ရှင်းပါသည်။ ယခု ဒုတိယ လူထုတိုက်ပွဲကို မလွန်ဆန် မခုခံနိုင် တော့သော နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို သွေးရူးသွေးတန်း အပူတပြင်း လုပ်ဆောင်လာပါသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများက လူထုတပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ပြီး တခဲနက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းပဲ မဟုတ်ပါသလော။ ဤကဲ့သို့ နအဖ စစ်အုပ်စုကို တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မတက်မဖြစ် တက်ရတော့သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်အောင် တိုက်ရိုက်ဖိအား ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ယခု ၂၀၀၇ ဒုတိယ လူထုတိုက်ပွဲ၏ အကြီးအကျယ်ဆုံး အောင်မြင်မှု ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နအဖ စစ်အစိုးရသည် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာ လှည့်ဖြားတတ်သည့် ဖက်ဆစ်ညာဉ်အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးကို ဗန်းပြပြီး အာဏာကို ရေရှည် ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤအချက်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး အောင်ပွဲခံရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြတ်ပြတ် ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် အလွန် အရေးကြီး လက်ငင်းကျသော အချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး အနေဖြင့် စစ်အုပ်စု အလိုကျ “အတုအယောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး” ကို ငေးမောမျှော်လင့် ယုံစားမနေကြဘဲ မိမိတို့၏ တိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန်ကို အပြင်းအထန် မြှင့်တင်ကာ အချိန်အတို တောင်းဆုံးအတွင်း အမြန်ဆုံး အနိုင်တိုက်ပြီး အမြန်ဆုံး ပြည်သူ့အာဏာကို သိမ်းပိုက် ကြရတော့မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သူ လူထုကြီးအဖို့ ယခုအခါ ပွဲသိမ်း ဆင်နွှဲကြရမည့် တနည်း “တတိယနှင့် နောက်ဆုံး” ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးဖြစ်သည့် ဤတိုက်ပွဲတွင် အဓိကအားဖြင့် ရှောင်ရန်နှင့် ဆောင်ရန်များကို ဦးစွာသိထားရန် လိုပေ သည်။
ရှောင်ရန်အချက်(၂)ရပ်ရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ အကြမ်းမဖက်ရေး (Non-violence) မူကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့် ဒုတိယ အချက် မှာ စေ့စပ်ကြေအေးရေး (Compromise)မူတို့ ဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သည့် သံဃာတော်များ၏ ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သည့် အကြမ်းမဖက်နည်းမှာ နအဖ စစ်အုပ်စု၏ အကြမ်းဖက် ချေမှုန်းမှုကို ခံခဲ့ရသည်မှာ လူတိုင်း အသိပင် ဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက် တိုက်ရမည့် တိုက်ပွဲ စဉ်များတွင် မြန်မာပြည်သူ လူထုသည် အကြမ်းမဖက်ရေးမူကိုပဲ ဆက်လက် စွဲကိုင်နေဦးမည်၊ တနည်း မေတ္တာလက်နက်ဖြင့်သာ ရင်ဆိုင်နေဦးမည်ဆိုလျှင် လူသတ်သမား ရှေ့မှောက်မှာ လည်စင်းခံပေးသလို ဖြစ်နေပေတော့မည်။ ဤသို့ကား ဘယ်နည်းနှင့်မှ အဖြစ်မခံ နိုင်တော့ပါ။ (ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းစဉ်ကိုသာ အသေဆုပ်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဆိုလျှင် ထိုသို့ ယုံကြည်သူများ ရှေ့ဆုံးမှ ဦးဆောင်ချီတက်ပြီး ပိုးစက်ပက်စက် အသေခံကြမှ ဖြစ်ပါလိမ့် မည်။)
ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုနေသော ဆန္ဒပြသမားတိုင်းတွင် မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ယူဆပါ သည်။ အမှန်က ဥပဒေဘောင် အတွင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေသော ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်၏ အသက်အန္တရာယ်နှင့် လုံခြုံမှုအတွက် ဥပဒေက အကာအကွယ် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ မရှိသဖြင့် ထိုဥပဒေ မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် ဆန္ဒပြသမားများသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိသာ ခုခံကာကွယ် ရတော့မည် ဖြစ်သည်။ “သေ-နာ တ၀၊ မုဒိန်း စသည်၊ ရာဂ ပြေအောင်၊ လူသွေးဆောင်၊ သေအောင် ခုခံခွင့်” ဟူ၍ ရာဇ၀တ် ဥပဒေမှာ အခိုင်အမာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုအခါ ဆန္ဒပြသမားတိုင်းသည် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်း ဖြိုခွဲလာမှုအပေါ် ခုခံကာကွယ်ရန် လိုအပ်လာပါက တိုက်ပွဲ၏ ဦးတည်ချက်ကို မထိခိုက်စေသောနည်းဖြင့် ပြန်လည် အကြမ်းဖက် ရင်ဆိုင် တုံ့ပြန်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည့် စေ့စပ်ကြေအေးရေးမူမှာ ရန်သူကို ဒူးထောက် အရှုံးပေးသော မူဖြစ်သဖြင့် ဤသစ္စာ ဖောက်ရေးမူကို အထူးပင် ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ရန်သူက အတုအယောင် အခွင့်အရေး၊ အနည်းငယ် မဖြစ်စလောက်ကလေး ပေးလိုက်ရုံနှင့် အချို့နိုင်ငံရေးသမားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ရန်သူနှင့် ပူးပေါင်းသွားပြီး ပြည်သူလူထုအပေါ် သစ္စာဖောက်ခဲ့သည့် အစဉ်အလာဆိုးများ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ဥပဒေတွင်း မြေပေါ်တိုက်ပွဲတွင် ကျောရိုးပျော့သူများ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့် ရောဂါဖြစ်သည်။
ယခု မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး ဆင်နွှဲနေသော အရေးတော်ပုံမှာ သာမန် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြပွဲ အဆင့်မျိုး မဟုတ်တော့ပါ။ ယခု မိမိတို့ ဆင်နွှဲနေသည်မှာ (၄၅)နှစ်တာ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်လာသည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အပြီးအပိုင် ဖြုတ်ချဖို့ ကြိုးပမ်းသည့် တော်လှန်ရေး (Revolution-Resistance) တရပ်ဖြစ်ကြောင်း သဘော ပေါက်ထားကြလျှင် တော်လှန်ရေးကို တော်လှန်ရေးနှင့် တူအောင် တိုက်ပွဲဝင် သွားကြရမည် မဟုတ်ပါလော။
(၂) လူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန်မြှင့်သည့် အနေဖြင့် ဥပဒေတွင်း တိုက်ပွဲနှင့် ဥပဒေပ တိုက်ပွဲများ ဆက်စပ်ပေးရန်တို့ ဖြစ် သည်။
၁၉၈၈ ပထမ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုမှု တိုက်ပွဲကို ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ (Students-led)
၂၀၀၇ ဒုတိယ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုမှု တိုက်ပွဲကို သံဃာတော်များ ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ (Sanghas-led)
ယခု ၂၀၀၈ တတိယနှင့် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွင် စစ်သား (တပ်မတော်သား) များ လူထုတိုက်ပွဲထဲ ပူးပေါင်းပါဝင် လာပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်က စစ်အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင်များကို အန်တုစိန်ခေါ်သည့် အခြေအနေမျိုး မလွဲမသွေ ဆိုက် ရောက်လာရန် ပြည်သူလူထုကြီးက ဆွဲဆောင်စည်းရုံး သိမ်းသွင်း သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ စစ်သား+ဘုရားသား(သံဃာ)+ကျောင်းသား+“သားသုံးသား” ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ပြီး စစ်သားများကပင် လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ တိုက်ပွဲကို ဦးဆောင်သွားမည့် Soldiers-led အနေအထားကို မုချဆိုက်ရောက် လာရပေမည်။ ဤအချက်မှာ ဆန္ဒပြသမားများက စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် လိမ္မာပါးနပ်စွာ စည်းရုံးလုပ်ဆောင် သွားရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။
ဒုတိယ ဆောင်ရန် အချက်ဖြစ်သည့် လူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရေးတွင် အောက်ပါကိစ္စများ
ပထမဦးစွာ ဥပဒေတွင်းတိုက်ပွဲတွင် မြေပေါ်/မြေအောက် အဖွဲ့အစည်းများ တော်လှန်ရေး ရေချိန်နှင့်အပြိုင် တပြေးညီ ဆက်စပ်ညီညွတ် ပေါင်းစည်းနေဖို့ဖြစ်သည်။
မြေပေါ်တွင် NLD ရှိသည်။ သံဃာတပ်ပေါင်းစုရှိသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်၊ ဗကသ၊ တကသ ကျောင်းသားအဖွဲ့များ ရှိသည်။ သုံးရောင်ခြယ်၊ အကြမ်းမဖက်၊ CNG လူငယ်အဖွဲ့များရှိသည်။ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ရှိသည်။ တတ်သိပညာရှင်များ ရှိသည်။ ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိသည်။ အလုပ်သမား လယ်သမား သမဂ္ဂများရှိသည်။ ဤမြေပေါ် အင်အားစုများ အားလုံး “လူထုဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်များအဖွဲ့” (Mass's Alliances for Democracy) အဖြစ် စုစည်းရပ်တည်ကြရမည်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အဓိကအားဖြင့် KNU နှင့် သူ၏တပ် KNLA ရှိသည်။ ABSDF (ကျောင်း သားတပ်မတော်) အပါအ၀င် KNPP က ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်းရင်းသား စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ ရှိသည်။ (ဤအဖွဲ့တွင် ကရင်နီ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း စသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစု ၆စု ပါဝင်သည်။)
လက်နက်မကိုင်သော ဥပဒေပ အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် NLD(LA)၊ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ၊ NCUB၊ NCGUB၊ DAB၊ FDB စသည့် ကမ္ဘာအနှံ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။
ဥပဒေတွင်း လူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန် မြင့်လာသည်နှင့်အမျှ နယ်စပ်က၊ ပြည်ပက ဥပဒေပ နိုင်ငံရေး လှုပ် ရှားမှုများကလည်း နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့အရေးကို အာရုံစိုက်လာပြီး စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးလာအောင် ကြိုးပမ်း ကြရပါမည်။ ထို့အတူ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကလည်း စစ်ရေး အရှိန်အဟုန်မြ‡င့်ပြီး၊ အကျပ်ရိုက် အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေသော ရန်သူကို ဖိအားပေး ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ လိုပါသည်။
ဥပဒေတွင်းနှင့် ဥပဒေပ တိုက်ပွဲများ ဆက်စပ်ရေးတွင် အထူးသတိထား ကိုင်တွယ်ရမည့် ကိစ္စမှာ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး ဥပဒေတွင်း ရပ်တည်နေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ (၁၇)ဖွဲ့၏ ပြဿနာဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းများသည် စစ်အစိုးရနှင့် Gentleman's agreement ရှိထားသဖြင့် သူတို့ အဖွဲ့အစည်းများ အနေနှင့် လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး လူထုနှင့်အတူ လိုက်ပါ ဆန္ဒပြ၍လည်း မဖြစ်၊ တောထဲပြန်ဝင်ပြီး စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လည်း မဖြစ်သည့် ဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေတွင် ရောက်ရှိနေပေသည်။ ဤပြဿနာကို ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ညင်သာသိမ်မွေ့စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့လိုသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများက လူထုတိုက်ပွဲအပေါ် သဘောထား တည့်မတ်မှန်ကန် နေဖို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ မိမိနှင့် ရန်သူတို့၏ တိုက်ပွဲ အနေအထားကို မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ဖို့ လိုသည်။ တိုက်ပွဲတိုင်းတွင် ရန်သူနှင့် မိမိအကြား၌ အနေအထား (၃)ရပ်ရှိသည်။
ယခု မြန်မာပြည်သူ လူထုကြီး ရောက်ရှိနေသည့် အနေအထားမှာ မိမိဘက်က သေနင်္ဂဗျူဟာ ထိုးစစ်အနေ အထားဖြစ်သည်။ စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အပူတပြင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သွေးရူးသွေးတမ်း လုပ်နေရသည်မှာ နအဖဘက်က သေနင်္ဂဗျူဟာခံစစ်သို့ ကျရောက်သွားခြင်း မဟုတ်ပါလော။
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီအပါအ၀င် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီ အင်အားစုများက တဖက်၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက တဖက်၊ စစ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များက တဖက် ပါဝင်သော သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ အမြန်ဆုံး ကျင်းပရေး
(၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် ပါဝင်သော ကြားဖြတ်အစိုးရ အမြန်ဆုံး ဖွဲ့စည်းရေး (အတိုကောက် အားဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေး၊ ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး) ဤကြွေးကြော်သံ (ဦးတည်ချက်) သုံးရပ်သည် တနှစ်အတွင်း အနိုင်တိုက်ရေး၊ အာ ဏာသိမ်းပိုက်ရေး လမ်းစ၏ သေနင်္ဂဗျူဟာ ဖြစ်ရမည်။
“လူထုဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်များအဖွဲ့” (Mass's Alliances for Democracy)က ဦးဆောင်၍ ဥပမာ - ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် သပိတ်စခန်း ဖွင့်မည်။ လမ်းပေါ်ထွက်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ သပိတ်မှောက် စီတန်းလှည့်လည်မည်။ နေပြည်တော် သိမ်းပိုက်ရေး ကြွေးကြော်မည်။
စည်းကမ်းရှိခြင်းသည် တိုက်ပွဲ၏ ပုံသဏ္ဍာန်တခုဖြစ်သည်။ အမှန်တရားနှင့် ကိုက်ညီခြင်းသည် တိုက်ပွဲ၏ ပုံ သဏ္ဍာန်တခုဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ဘလော့ဂါများ၊ ပြည်ပ ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြား မီဒီယာများသည် တိုက်ပွဲ၏ ပုံသဏ္ဍာန်တခု ဖြစ်သည်။
အခြားပုံသဏ္ဍာန်များ - လူထုက လူထုရန်သူ နအဖအစိုးရ၏ လက်ကိုင်တုတ်များဖြစ်သည့် ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်း အားရှင်နှင့် သတင်းပေးများကို ဥပမာ - ရပ်ကွက်လူထုက မြို့ပြ ပြောက်ကျားပုံစံ လက်သည်မပေါ်အောင် ဟန့်တား ဖြိုခွင်းသည့် နည်းမျိုးကိုလည်း ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ထိုလက်တဆုပ်စာ လက်ကိုင်တုတ်များ ရပ်ကွက်ထဲတွင် မနေရဲတော့ဘဲ စိတ်ချောက်ချား တုန်လှုပ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားအောင် ရပ်ကွက်လူထုက ခြိမ်းခြောက်နေရမည်။
အရေးတော်ပုံတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေသော ဆန္ဒပြသမား တဦးချင်းသည် တိုက်ပွဲ၏ ဦးတည်ချက်နှင့် မလွဲ ချော်လျှင် မိမိစိတ်ကူးရှိသလို မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် ထိုကြံ့ဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်၊ သတင်းပေးများကို အမျိုးမျိုး နှောက်ယှက် ဒုက္ခပေးနိုင်သည်။
(ခေတ္တ - ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)
စာတမ်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သော æ
(၁) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ပြန်လွှတ်ပေးရေး
(၂) သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေး
(၃) ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး
ဤကြွေးကြော်သံ သုံးရပ်မှာ လူထုတိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန်အတိုင်း မမှိတ်မသုန် တဆင့်ချင်း တထစ်ချင်း အ ကောင်အထည် ပေါ်လာရမည်မှာ မုချဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်လာမည်။ ဒုတိယအဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သုံးပွင့် ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးလာမည်။ တတိယအဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပါဝင်သော ကြားဖြတ် အစိုးရ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ ဤအချိန်တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အလှည့်အပြောင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အခြေအနေ သို့ ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာလျင် နအဖအစိုးရနှင့် အတူတကွ နအဖအစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံ (၇)ချက်၊ အ မျိုးသားညီလာခံနှင့် သူတို့ရေးဆွဲသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ စသည့် အားလုံးလိုလို ပယ်ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွား လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ အထူးအရေးကြီး လိုအပ်သည်။ ကြားဖြတ်အစိုးရ ပေါ်ပေါက် လာမှသာ ထိုကြားဖြတ်အစိုးရက အောက်ပါ အရေးကြီး ကိစ္စများကို အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။
ဒုတိယ - ကြားဖြတ်အစိုးရက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခေါ်ယူပေးရမည်။ ထိုလွှတ်တော်ကမှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥ ပဒေ ရေးဆွဲ အတည်ပြု ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ကြားဖြတ်အစိုးရထံမှ အာဏာလွှဲပြောင်း ရယူရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ဒီမိုကရေစီ အကျဆုံးနှင့် သိက္ခာအရှိဆုံး အာဏာလွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည်။ (တရားမ၀င် စစ်အစိုးရအတွက် အကောင်းဆုံး ထွက်ပေါက်လည်း ဖြစ်သည်။)
ဒီမိုကရေစီအစိုးရ မပေါ်ပေါက်သေးခင်၊ တနည်း အာဏာလွှဲပြောင်း မယူရသေးခင် ကြားဖြတ်အစိုးရ တာဝန် ယူထားသော ကြားကာလတွင် အောက်ပါ အချက်များကို နားလည်လိုက်နာဖို့ လိုသည်။
ကြားဖြတ်အစိုးရက လွှတ်တော်ခေါ်ပေးပြီး လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲနေစဉ်ကာလတွင် တောတွင်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များသည် ကြားဖြတ်အစိုးရနှင့် အကြိုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပနိုင်မည်။ ဤ အဆင့်တွင် လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများအနေနှင့် ‘စစ်ရေးချို - နိုင်ငံရေးပို’ မူကို ကျင့်သုံးရမည်။
(၂) တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာခံသည်။ အစိုးရသည် ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူလူထုကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် အစိုးရလက်အောက်မှာ ရှိရမည်။
(၃) နိုင်ငံတော် အာဏာသည် ပြည်သူလူထုထံမှ ဆင်းသက်စေရမည်။ တပ်မတော်သည် ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
ကြားဖြတ်အစိုးရ တာဝန်ယူထားသည့် ကြားကာလ သို့တည်းမဟုတ် ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ပေါ်ထွန်းစကာလတွင် အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပြည်တွင်း အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့် “ပြည်တော်ဝင် လာမည့်” ပြည်ပအခြေစိုက် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်မလာဖို့ အထူး အ ရေးကြီးသည်။ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ပေါက်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ကြားတွင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု အထူးအရေးကြီးသည်။ ပြည်ထောင်စုကြီး တစည်းတလုံးတည်း ရှိရေးအတွက် တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးတွင် ပြင်းပြသော တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိရန် အထူးအရေးကြီးသည်။
ဤကဲ့သို့ တနှစ်အတွင်း အနိုင်တိုက်ပြီးပြီ။ အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးပြီဆိုလျှင် မြန်မာပြည်သူ လူထုကြီး၏ သမိုင်းစာ မျက်နှာသစ်၊ ဘ၀သစ်ကို စတင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ပြောလိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုကြီး တရပ်လုံးသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ် ချနေစဉ်မှာရော၊ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို ထူထောင်နေစဉ်မှာပါ တိုက်ပွဲစဉ်တလျှောက်လုံး “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” နှင့် တသားတည်း ရှိနေဖို့ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း။
posted by မြင့်ဇေ @ 10:04 PM0comments